Turjumaanka Microsoft wuxuu hadda taageeraa Android Wear | Androidsis
Turjubaanka Microsoft waxaa la bilaabay bilo ka hor sidii barnaamij kaas isku day inaad ag istaagto Google Translator laakiin taasi weli wax yar ayaa hadhay oo u dhigma Google. Mid kale oo ka mid ah kuwa Microsoft ayaa ku sharxaya inay bilaabaan barnaamijyo tayo leh oo isku dayaya inay ku dhiirrigeliyaan isticmaaleyaal badan inay ka fikiraan mar uun oo ay isku dayaan Windows Phone. Waa mid ka mid ah siyaasadaha halista ah ee kuwa ku jira Redmond, tan iyo, ugu dambeyntii, waxay hagaajineysaa tayada noocyada codsiyada ee Google Play Store uu leeyahay, taas oo si sax ah u ah meesha malaayiin isticmaaleyaal ah ay dib ugu laabtaan si ay u helaan waxa ugu fiican softiweerka laga heli karo taleefannadaada Android ama kaniiniyada.
Maanta Microsoft waxay cusbooneysiisay barnaamijkeeda Turjumaanka nooca 1.2. Cusboonaysiintaan waxay ku keentay dhowr astaamood oo aad u cajaa'ib badan oo aanan ku dhaafi karin khadadkaas. Midkoodna waa taageerada Android Wear. Hadda, markaad safreyso oo aad la kulanto qof ku hadla luqad aan adigu ahayn, waxaad isticmaali kartaa Microsoft Translator si uu uga dhex hadlo Android Wear. In kasta oo halkan ay tahay in lagu xuso in Android Wear kaliya wuxuu u shaqeeyaa mid ka mid ah labada kaqeybgalayaasha. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waa muuqaal aad u xiiso badan oo hubaal in wax badan laga faa’iideysto.
1 Wadahadal dabiici ah
2 Waxyaabaha uu
Wadahadal dabiici ah
Marka laga reebo taageerada loo yaqaan 'Android Wear' oo kuu oggolaaneysa inaad ku isticmaasho Google Translator qalab kasta oo la gashado oo aad ku hoos haysato wax ka beddelka gaarka ah ee nidaamka Android, Microsoft Translator wuxuu ku darayaa waxa loogu yeero sida sheekaysiga dabiiciga ah. Kuwani waxay la shaqeeyaan Ingiriis, Faransiis, Jarmal, Talyaani, Isbaanish iyo sidoo kale Shiinaha (labadaba dhaqameed iyo fudeyd labadaba). Luuqadaha cusub ee ay Microsoft soo kordhin doonto ayaa halkan lagu soo dari doonaa dhawaan si markaa wada hadaladaas dabiiciga ah ee umuuqda kuwa waaweyn loo isticmaali karo
Dheeraad kale waa taariikhda wada hadalada hada leh sumadda goobta meesha aad ku sameysay wada hadaladaas, markaa waxaad awoodi doontaa inaad dib u eegto iyaga waqti kasta si aad u xasuusato ereyada qaarkood ama weedhaha qaarkood. Marka nuqulkan cusubi wuxuu u adeegi karaa aalad taageero si loo hagaajiyo mid kasta oo ka mid ah luqadaha ay taageerto, markaa haddii aad ku jirto daraasadda mid ka mid ah, xaqiiqdii way fiicnaan lahayd inaad isku daydo oo aad rakibto.
Xaqiiqdii, cusbooneysiintan cusub waxay heleysaa Microsoft Translator qayb ahaan way kafiican tahay Google Translate dhinacyada qaarkood. Sidoo kale halkan waxaan markale ku garwaaqsaneynaa, marka la eego barnaamijka softiweerka, Microsoft inay taqaano sida wax loo qabto si aad u wanaagsan, sidaa darteed markasta oo ay keento barnaamij cusub ama cusbooneysiin wanaagsan, sida tan oo kale, waxaan soo marineynaa goobtan casriga ah si aan uga hadalno iyada.
Dhinacyadaas marka ay ku dhacdo Google waa inaysan u isticmaalin Android Wear shaashad labaad, ugu yaraan weli. Midda kale, dhinaca aan aadka u yarayn ayaa ah inay taageero siiso Mandarin ama Shiinaha. Google waxay bixisaa taageero, laakiin waxay u muuqataa taas uma shaqeeyo sida aad jeceshahay. Tan waxaa ugu wacan xaqiiqda ah in Google laga xiray Shiinaha, taasoo adkeyneysa adeegsiga barnaamijkaaga si loo turjumo. Marka barnaamijka Microsoft wuxuu la mid yahay mid ka mid ah isku dayga ugu wanaagsan haddii sabab kasta ha noqotee inaad ku soo booqato waddankan.
Cusbooneysiinta ayaa hadda laga heli karaa Google Play Store iyo kuwa idinka mid ah ee qaba Android Wear, ugu yaraan wax dhacayaa iskuma dayaan oo go'aanso haddii ay tahay mid ka mid ah barnaamijyadan muhiimka ah in lagu xiro curcurka gacantaada oo markaa aad awood u leedahay inaad u isticmaasho marka aad isku aragto hammuun ah inaad tarjunto qoraallada si aad ula xiriirto qof aan fahmin afkooda. Aynu nidhaahno Microsoft mar kale waxay soo bandhigeysaa tayo badan oo ku saabsan Play Store barnaamijkan oo aan ku jirin muddo dheer dukaanka barnaamijka oo ay ku adkeyneyso Google inay sidoo kale hagaajiso codsigeeda, taas oo ah habka aan rajeyneyno in jacaylka ku filan kadib dhawr bilood bilaa cusbooneysiin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Turjubaanka Microsoft wuxuu ku darayaa taageerada Android Wear nooca cusub ee 1.2
Ma sameyn kartaa koonto aan ku biiro?
Jawaab Fernando Condori Encinas
marar badanna waan isku dayay mana ii shaqeyneyso